Dagaal xoogan oo xalay ka dhacay Xamar kadib markii ay farxumeyn iyo guryo kala bixid billaabeen ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka ah ee baaraya xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho. Ruunkinet 15/01/07
Dagaal xooggan ayaa xalay ka dhacay qeybo ka mid ah qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Dagaalkan oo laysu adeegsaday hubka culus iy kan fudid ayaa la sheegay in u dhex maray qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyo ciidamada Itoobiya ee qabsaday koonfurta Soomaaliya oo ay wehliyaan maleeshiya loogu yeero ciidamada qaranka oo ah taageerayaasha madaxweynaha iyo ra'isul wasaaraha DFS.
Wararka ugu horeeyay ayaa la sheegay in uu dagaalka ka dhacay degaanka warshadaha kadib markii ciidamada Puntland iyo kuwa Itoobiyaanka ah ay isku dayeen in ay guri ay gabdho joogeen baaraan kadibna loo sheegay in ay iska tagaan maadaama ay habeyn ahayd taasoo ay diideen.
Itaasi kadib ayay ciidamda Itoobiya iyo kuwa Puntland rasaas fureen taasoo dhalisay in gaarigii ay wateen baasuuka lagu qarxiyo.
Ciidama kala oo taabasan dowladda oo ay la socdaan kuwa Itoobiyaanka ah ayaa gurmad u sameeyay in kastoo laba gaari halkaasi looga gubay kadibna ay isku dayeen in gurmada kale uga yimaado dhinaca Black Sea.
Dagaalkan oo ay uga dhinteen labada dhinca ciidan badan iyo qaar kale oo ka tirsan dad rayid ah ayaa la sheegay in uu sababay kagadaal markii ay soo bexeen warar sheegaya in ciidamada Itoobiya iyo kuwa la sheqeeya ee Soomaalida ah ay billaabeen faraxumeyn ay u geysanayaa haweenka ku jira guryaha ay hubka ka baarayaan.
Warka ayaa intaasi ku daraya in ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa reer Puntland ah ay billaabeen in ay qol gooni ah geeyaan haweenka ay u arkaan in ay filsan yihiin ayagoo markiisi fara xumeynaya.
Warkan oo aad looga hadal yahayo magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in maleeshiya arrintan ka careysan ay aad uga xumaadeen arrimahan ayna ku biireen dagaalkii xalay dhex maray ayaga iyo ciidamada Itoobiyaanka ah iyo kuwa DFS.
Sidoo kale, ciidamadan ayaa billaabay in ay kala baxaan guryaha qaar kood dad gaar ah ayagoo mar walba billiliqo u geysta guryaha.
Digsiyada cuntada lagu karsado ayay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho sheegayaa in ay ka mid yihiin wax yaabaha ay billiliqeysanayaan ciidamadaasi.
"Tolow ma waxay doonayaa in xabsigii Al Quberyb ee Iraq ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho si loogu fara xumeeyo ragga iyo dumarka ku nool magaalada Muqdisho iyo meelo kale", ayay tiri haweynay aan wax ka wareysannay xaaladdan la sheegaya in ay ka socoto magaalada Muqdisho.
Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxay aaminsan yihiin in qaar badan oo ka tirsan ciidamada Itoobiyaanka ah ay sidaa cudurka loo yaqaan AIDS-ka oo sida weyn wax u dila kuna faafa galmada.